Luminta Xuquuqda Hidaha Adduunka ayaa Caqabad ku noqon doonta Soo kabashada Dalxiiska Liverpool
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Luminta Xuquuqda Hidaha Adduunka ayaa Caqabad ku noqon doonta Soo kabashada Dalxiiska Liverpool
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Dalxiiska dhaqanka ayaa hadda ah ganacsi weyn, iyadoo 29% ka mid ah suuqyada safarka adduunka ay sida caadiga ah ku socdaan safarka noocan ah.
Dalxiisayaasha caalamiga ah ayaa si aad ah uga badan celcelis ahaan marka loo eego dalxiisayaasha gudaha.
Liverpool ayaa hada qarka u saaran inay waayi doonto dhowr faa iidooyin kala duwan sababo la xiriira dhawaanta la shaaciyey.
Liverpool hadda waxay u baahan tahay inay si firfircoon uga hawl gasho sida ay u maareyso warkan.
In kasta oo dalabka dalxiiska gudaha uusan saameyn ballaaran ku yeelan doonin luminta heerka dhaxalka adduunka ee Liverpool, Dalabka caalamiga wuxuu noqon karaa sida dalxiisayaal badan oo caalami ah u soo booqdaan Liverpool si ay ula kulmaan dhaqanka iyo taariikhda magaalada.
Dalxiiska dhaqanku hadda waa ganacsi weyn, iyadoo 29% ka mid ah suuqyada safarka adduunka ay sida caadiga ah ku socdaan safarka noocan ah. Luminta xaaladdeeda hidaha ayaa ka dhalan karta iftiinka dhaq dhaqaaqa Liverpool waxayna sababi kartaa dalxiisayaal caalami ah oo booqda meelo kale oo UK ah oo heysta sumaddan, sida Bath.
Dalxiisayaasha caalamiga ah ayaa si aad ah uga badan celcelis ahaan marka loo eego dalxiisayaasha gudaha. Marka loo eego xogta warshadaha, sannadka 2019 (sanadkii 'caadiga' ahaa ee ugu dambeeyay dalxiiska), celceliska kharashka dalxiis dibedda ee qof kasta oo deggan wuxuu istaagay US $ 1,057, halka celceliska qarashka dalxiiska gudaha ee qof kasta oo deggan UK uu istaagay US $ 263 (GB £ 191).
Liverpool waxay ubaahantahay inay soo jiidato dalxiis caalami ah inta ugu macquulsan sanadaha soo socda iyadoo la tixgelinayo tirada badan ee dakhliga ay soo saarto. Maaddaama xaaladdeeda hiddaha ay hadda tagtay, dalabka caalamiga ah saameyn taban ayuu ku yeelan karaa, soo kabashaduna waa sii dheeraan kartaa.
Liverpool ayaa haatan qarka u saaran inay waayi doonto dhowr faa iidooyin kala duwan sababo la xiriira dhawaanta lagu dhawaaqay. Sida horeyba loogu sheegay, saxaafadda sii kordheysa iyo xayeysiinta la imaaneysa inay tahay goob dhaxal adduunka ah waxay kordhineysaa dalxiiska caalamiga waxayna u dhaqmeysaa inay tahay aalad suuqgeyn awood leh oo magaaladu ku bixin doonto wax yar. Haysashada xaaladda dhaxalka adduunka waxay ku dhowdahay inay u shaqeyso sidii summad tayo leh suuqa caalamiga ah si loo arko. Tani waxay si gaar ah saameyn ugu leedahay suuqa isha ee Shiinaha ee xoogga leh ee la ogyahay inay saameyn ku yeelanayaan astaamaha muujinaya tayada ama heerka sare. Sharciga hoostiisa, goobaha dhaxalka sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan lacag loogu talagalay ilaalinta iyo dayactirka.
Booqashada caalamiga waxay qaadan laheyd waqti si ay uga soo kabato aafada ka dib si kastaba ha noqotee, kobacaani wuxuu qaadan karaa xitaa waqti dheeri ah si looga soo kabsado hada maadaama Liverpool ay lumisay maqaamkeedii aduunka. Magaaladu hadda waxay u baahan tahay inay noqoto mid firfircoon sida ay u maamusho warkan, haddii ay ahaan lahayd iyada oo loo abuurayo ololeyaal suuq cusub oo suuqa caalamiga ah, ama iyadoo si deg deg ah looga codsado go'aankan inay dib u soo ceshato soo jiidashadeedii dhaqanka.